eParewa || Peace and Prosperity » अष्ट्रेलीयामा भएको टेस्ट सिरिज भारतले जितेकोमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई
अष्ट्रेलीयामा भएको टेस्ट सिरिज भारतले जितेकोमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई
२०७५ पुस २४ गते मङ्गलबार ०९:१७
भारत र पाकिस्तान दुश्मनी नौलो होईन । क्रीकेटमा त झनै प्रतिशोधको रुपले हेर्ने गरिन्छ । यी दुई देशबिच हुने क्रीकेट खेलमा आफ्नो देशले हार्दा ठूलो युद्धमा हारेको महशुस गर्छन । हारको कतिपय ब्यक्तिहरुले झोकमा टि.भि. फुटाल्ने देखि अनेकौ...
भारत र पाकिस्तान दुश्मनी नौलो होईन । क्रीकेटमा त झनै प्रतिशोधको रुपले हेर्ने गरिन्छ । यी दुई देशबिच हुने क्रीकेट खेलमा आफ्नो देशले हार्दा ठूलो युद्धमा हारेको महशुस गर्छन । हारको कतिपय ब्यक्तिहरुले झोकमा टि.भि. फुटाल्ने देखि अनेकौ गलत कार्यहरु गरेको सुन्न पाईन्छ । बलिउडका फिल्मी कथाहरुमा समेत दुई देशको खेललाई मसलाको रुपमा प्रयोग गरेको देख्न पाईन्छ ।
तर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री ईमरान खानले यहि कुरालाई नयाँ मोड दिएका छन । उनले आज ट्वीटरमा विराटलाई बधाइ दिँदै लेखेका छन्, ‘अष्ट्रेलीयाको टेस्ट सिरिजमा पहिलो पटक जित हात पारेकोमा विराट कोहली र इन्डिया क्रिकेट टीमलाई बधाइ !’
अष्ट्रेलीयामा भएको टेस्ट सिरिज ७१ वर्षे इतिहासमा भारतको तर्फबाट पहिलो विजेता कप्तानको रुपमा विराटले आफ्नो नाम लेखाएका छन् । उनको टीमले अष्ट्रेलीयामा नै जितको खुसीयाली मनाएका थिए ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री ईमरान पूर्व क्रिकेटर पनि हुन ।उनले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गर्दै आई रहेका छन् । भारतीय क्रिकेट टीमप्रति सद्भाव देखाउँदै उनले गरेको ट्वीट अहिले भारत र पाकिस्तानमा चर्चाको बिषय बनेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको यो ट्विटले राजनीतिक सम्बन्धमा पनि नयाँ मोड लिन सक्छ कि भन्ने आशका समेत सामाजिक संजालहरुमा उठेको पाईन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७५ पुस २४ गते मङ्गलबार ०९:१७